दुई सिम कार्ड संग स्मार्टफोन। मोबाइल उपकरणहरूको बजार मा नयाँ
आधुनिक जीवनशैली हाम्रो लागि सख्त नियम र आवश्यकताहरु prescribes। थप र परिचितहरू सामाजिक सञ्जाल मा काम, थप सभा र सम्पर्क लागि आवश्यक। र यो सबै यो सार्वजनिक गोपनीयता संयोजन गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तर समय कम छ, र निरंतर डेटिङ exponentially बढ्दै संख्या? यदि
मोबाइल फोन निर्माता यो आवश्यकता पक्रेको छ र इलेक्ट्रनिक्स स्टोर को समतल धारण दुई सिम कार्ड संग स्मार्टफोन। सुरुमा, यस्तो मोडेल असामान्य को खरीदारों भएको छ, तर त्यो चाँडै थप र थप लोकप्रियता हासिल गर्न थाले। अब, यस्तो कार्य विवरण लगभग हरेक दोस्रो उपकरण, विभिन्न कम्पनीहरु भन्दा विकासकर्ताले प्रस्तावित मा देख्न सकिन्छ। गरेको यो नवीनता मा एक विस्तृत नजर र यसको विशेषताहरु पहिचान गरौं।
2 सिम कार्ड संग स्मार्टफोन - व्यापार मान्छे को लागि र एक नयाँ नम्बर किनेको गर्नेहरूका लागि एक सुविधाजनक र व्यावहारिक समाधान, तर पुरानो संग भागमा चाहँदैनथे। आखिर, नयाँ सिम कार्ड गर्दा, तपाईं स्थायी रूपमा केही सम्पर्क गुमाउन सक्छ। दोस्रो मोबाइल फोन को समारोह को लागि एक खरीद सबैले किन्न सक्छन् छ। सामान्यतया यस्तो उपकरणहरू मा फोन पुस्तक दुवै कार्डहरू लागि नै हो। नियमित फोन विपरीत यो तपाईं सम्पर्क चयन गर्दा, प्रयोगकर्ता जो देखि कल गरिनेछ संख्या चयन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने छ। एउटै एसएमएस सन्देश लागू हुन्छ।
दुई सिम कार्ड संग पहिलो स्मार्टफोन मा एक बरु उच्च मूल्य श्रेणी थियो। तर अब, यस्तो कार्य उपकरणको लागि लक्षित श्रोताको चासो देखेर, निर्माता गरेका छन् यस्तो टयूबिंग खरीदारों को सबै भन्दा ठूलो सम्भव नम्बरको ध्यान आकर्षित गर्न, उपलब्ध छ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा - यो उपभोक्ताहरु हात सधैं छ। अब स्मार्ट फोन2सिम कार्ड 10,000 rubles को लागि खरिद गर्न सकिन्छ, र 3-4 को हजारौं लागि।
फोन के ब्रान्ड चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ? तथ्यलाई प्रस्ताव को एक यस्तो प्रशस्त निर्माताहरु को ती निर्णय गर्न गाह्रो छ संग अझ खाता ठ्याक्कै चासो मा लिन छ।
तपाईं तथ्याङ्क, सबै भन्दा लोकप्रिय यस्तो सैमसंग, एलजी र HTC रूपमा दुई सिम कार्ड कम्पनीहरु संग एक स्मार्टफोन खरिद भरोसा भने। उत्तरार्द्ध विकल्प ट्रेडमार्क एक लोकप्रिय ब्रान्ड भएको छ रूपमा सूचीकृत गर्नेहरूमध्ये उच्चतम लागत छ। थप सस्तो सेल फोन को उपसर्ग Duos संग सैमसंग ग्यालेक्सी लाइन को प्रतिनिधिको छन्। यो सहज र बहु-कार्यात्मक स्मार्ट फोन उच्च गुणस्तरीय टच स्क्रीन संग लोकप्रिय एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम र उपयोगी अतिरिक्त कार्यहरु र आवेदन को सेट मा आधारित।
हालै, थप र थप कम्पनीहरु यी स्मार्टफोन आफ्नै संस्करण जारी। यी फ्लाई, सोनी र तीव्र समावेश छन्। छैन त लामो पहिले सबैलाई बिक्री को लागि जारी गर्न contrived जो कम्पनी नोकिया, धेरै गरेर हैरानी थियो2सिम कार्ड, उपकरणहरू सबै प्रशंसक लागि किफायती भएका छन् जो संग सबै भन्दा आधारभूत मोबाइल फोन "कुरा गर्न।"
तर कम्पनी Explay थप भयो। यसको विकासकर्ताहरूले दुई सिम कार्ड संग ग्राहकहरु स्मार्टफोन प्रस्ताव गर्नुभयो, र आफ्नो मोडेल तुरुन्तै3स्लट समावेश। त्यसैले, तपाईं मात्र ब्रान्ड कस्तो तपाईँलाई धेरै विश्वास क्रम, निर्धारण गर्न बाँकी छन्। आखिर, केही ठूलो नाम मा skimp छैन, मात्र सिद्ध सामान र प्रशंसित उत्पादकहरु किन्न रुचाउँछु। यो पर्स लागि यति कडा छैन किनभने र, केही कम लोकप्रिय फोन रुचि हुनेछ।
कुनै पनि मामला मा, दुई सिम कार्ड संग एक स्मार्टफोन छनौट, तपाईं सधैं थप मिसिन फैशन सिकार, को चपेटामा यो क्षति र malfunctions मामलामा हुन्छ कि सम्झना गर्नुपर्छ। यसलाई सम्पर्कमा हुन महत्त्वपूर्ण छ तपाईं यदि, तपाईं आफैलाई मोडेल को एक सरल कार्य गर्न सीमित गर्नुपर्छ। अन्यथा तपाईं दुई फोन नम्बर सामग्रीहरू गुमाउने जोखिम चलाउनुहोस्।
पहिलो grader लागि सही फोन छनौट
मोडेल आईफोन आईफोन 2G देखि आईफोन 5
Meizu M2 नोट: फोन को मालिक को समीक्षा
रड भद्दा ऊन: उसलाई पर्छ?
फ्रान्सेली स्टीवर्ट - अमेरिकी अभिनेता, सबै भन्दा राम्रो फिल्म "तेस्रो रक को Sun. देखि" को लागि ज्ञात
यातायात प्रकाश पैदल: प्रकार र फोटो
"युद्ध र शान्ति" को सारांश लियो टोलस्टोय द्वारा: सम्झनुहोस् पढ्न
विभिन्न तरिकामा: "Chernobyl को छाया Stalker" कसरी गर्न फैशन सेट गर्न?
ट्यांक को विश्व मा ग्राफिक्स सेटिङहरू: अवलोकन, विशेषताहरु र सिफारिसहरू